Ny Southwest Airlines dia nanao fanadihadiana momba ny mpanamory fiaramanidina manompa an'i Biden
Home » Lahatsoratra farany farany » Airlines » Ny Southwest Airlines dia nanao fanadihadiana momba ny mpanamory fiaramanidina manompa an'i Biden
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovao • People • tompon'andraikitra • Safety • Tourism • Fitaterana • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Etazonia Vaovao Vaovao
Ny Southwest Airlines dia nanao fanadihadiana momba ny mpanamory fiaramanidina manompa an'i Biden.
Ny fampanantenan'ny Atsimo Andrefana hamahana mivantana ny toe-draharaha miaraka amin'ny mpiasa resahina, taorian'ny fanadihadiana anatiny, dia vao mainka niteraka fanoherana sy fitakiana fanambarana mafonja kokoa sy hetsika mivaingana.
Southwest dia tsy mamela ny mpiasa mizara ny heviny ara-politika manokana mandritra ny asa manompo ny mpanjifa.
Ny sasany dia niantso ny Federal Aviation Administration mba handray anjara sy hijery ny fahasalaman'ny mpanamory.
Nahazo tsikera ara-drariny avy amin'ny mpandala ny nentin-drazana ihany koa ilay zotram-piaramanidina, noho ny filazana fa “niondrika tamin'ny vahoaka elatra havia.”
Nisy andian-teny niparitaka be nampiasaina hanevatevana ny filoha amerikana Joe Biden no niteraka fanadihadiana anatiny nataon'ny Southwest Airlines.
Ny mpitatitra monina any Dallas dia nanambara fa nanangana fanadihadiana anatiny izy ireo taorian'ny nanasoniavan'ny mpanamory iray azy tamin'ny fehezan-teny 'Andao Handeha Brandon' na dia teo aza ny fanamafisam-peo.
"Ny Southwest dia tsy mamela ny mpiasa mizara ny heviny ara-politika manokana mandritra ny asa manompo ny mpanjifantsika, ary ny fomba fijerin'ny mpiasa iray dia tsy tokony ho raisina ho toy ny fomba fijerin'ny Atsimo Andrefana sy ny mpiasa 54,000 miaraka aminy," Southwest Airlines hoy ny fanambarana omaly.
Niteraka resabe ny tatitra fa nisy mpanamory iray tamin’ny a Southwest Airlines Ny sidina avy any Houston, Texas mankany Albuquerque, Nouvelle-Mexique tamin'ny zoma dia nilaza hoe, 'Andao isika Brandon' na dia ny fanamafisam-peo aza - meme mpandala ny nentin-drazana elatra havanana vao haingana izay nanjary fehezan-dalàna momba ny fahavetavetana mitodika amin'ny Demokraty ankehitriny. Ny filoha amerikana Joe Biden.
Araka ny filazan'ny mpanao gazety AP Colleen Long, izay sendra tao anatin'io sidina io, dia saika nesorina izy rehefa avy nanandrana nanontany ny mpanamory momba ny fampiasana ilay fehezanteny.
Ny fanehoan-kevitry ny kaompaniam-pitaterana izay toa malemy tamin'ny zava-nitranga dia maro no nitaky ny hamantarana ampahibemaso sy ny fandroahana ilay mpanamory, ny hafa kosa niantso ankivy ny zotram-piaramanidina amin'ny ankapobeny. Ny sasany dia tonga hatramin'ny fampitahana ny fanehoan-kevitra manohitra an'i Joe Biden amin'ny fanambarana ny tsy fivadihana amin'ny mpampihorohoro.
Nisy mihitsy aza no niantso ny Fitondram-panjakana Federaly mba handray anjara sy hijery ny fahasalaman'ny mpanamory.
Airline Southwest nanana ny anjarany ara-drariny tamin'ny fanakianana avy amin'ny mpandala ny nentin-drazana ihany koa, noho ny filazana fa “niondrika tamin'ny vahoaka elatra havia”.
Prof. Dea Mallin hoy:
November 1, 2021 amin'ny 17: 17
Alert! Hadisoana tsipelina!
Ao amin'ny iray amin'ireo lahatsoratra amin'ity laharana ity, diso tsipelina ny teny hoe “brouhaha” ny tonian-dahatsoratrao.
Avy amin'ny dikantenin'i «fuss» teo amin'i Wikibolana frantsay.
Ny mpamoaka lahatsoratrao dia nanoratra na namela azy ho soratana hoe “bruhaha” izay tsy azo atao amin'ny teny frantsay.